Iphrofayili yenkampani-Rech Chemical Co. Ltd.
I-Rech Chemical Co. Ltd yasungulwa ngo-1991 njengenkampani egxile ekukhiqizeni nasekusabalaliseni imikhiqizo yokulandela umkhondo, ebandakanya izinto zokusetshenziswa ezimbonini, ukudla kwezitshalo, impilo yezilwane. Njengamanje, i-Rech Chemical isikhule yaba umphakeli omkhulu we-ferrous sulphate mono granular.
I-Rech Chemical Co. Ltd isungule yaba ngumkhiqizi oholayo wezinto ezilandelwayo eChina. Sisebenza ibhizinisi lomhlaba wonke kanye nensizakalo ephelele kanye nezinsiza. Umsebenzi wethu ukuhlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme ukuthuthukisa impilo nokusebenza kwezilwane nezitshalo.
I-Rech Chemical Co. Ltd iyinkampani enobungani kakhulu yamakhasimende futhi ikholelwa ekwakheni ubuhlobo obude bekhwalithi namakhasimende ethu ngokunikeza insizakalo yamakhasimende ehlukile ongayethemba futhi uthembele kuyo.